प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई हेप्नुभयो : ओनसरी घर्ती « हाम्रो ईकोनोमी
प्रधानमन्त्री ओलीले मलाई हेप्नुभयो : ओनसरी घर्ती
पदको भोकोचाहिँ होइन, तर मैले पटक–पटक अवसर पाएकोचाहिँ साँचो हो । लाभका पदहरूमा सबैले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने मेरो पनि मान्यता हो । किनभने, आन्दोलनमा त्याग, तपस्या, बलिदान सबैले गरेका छन् । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक सभासद् भएँ, ०७० मा रोल्पाबाट निर्वाचित भएँ र अहिले फेरि समानुपातिकबाट सांसद भएकी छु । यसपालि मलाई सांसद हुन इच्छा थिएन । पार्टीले ‘समानुपातिकमा हेरफेर हुन सक्छ’ भनेपछि म उम्मेदवार बन्नुपरेको हो ।
पछि पनि म छाड्न सक्थेँ, त्यो मनपस्थितिमा पनि थिएँ । सायद, यो कुरा मिडियामा पनि आयो । तर, त्यो पनि विविध कारणले छाड्नुनपर्ने भयो । मलाई ‘सभामुखका लागि पनि तयार हुनू’ भनिएको थियो । मैले आफैँले ‘यसपटक म जान्नँ’ भनेँ । किनभने, धेरै नेताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । उहाँहरूले मभन्दा राम्रो काम गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास मलाई थियो । नेताहरूले मेरो इच्छा पनि सोध्नुभएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिज्यू दुवैजना दोहोरिरहेको अवस्थामा नेताहरूले मलाई ‘सभामुख के गर्ने ?’ भनेर सोध्नुभएको थियो । तर, मैले नै ‘हुन्नँ’ भनेँ ।
यो कुरा सत्य हो । सुशीला कार्की आजको दिनमा जेजस्तो भए पनि त्यसवेला मैले शतप्रतिशत सकारात्मक रूपमा बुझ्थेँ । किनभने, एकजना महिला पढेलेखेर, बहुत दुःख गरेर प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा पुग्नुभयो । उहाँलाई म आफैँ सहभागी भएको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएको हेर्न चाहन्थेँ । यो कुरा मैले धेरैपटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई पनि भनेको थिएँ । त्यतिवेला म अलि अस्वस्थ भएँ, अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्‍यो । पछि अप्रेसन नै गर्नुपर्‍यो ।
तर, कतै प्रचण्डजीले दोहोरो रोल खेल्नुभयो कि भन्ने आशंकाहरू उहाँलाई परेछ । कतै सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन खोजेको त होइन भन्ने ढंगबाट पनि शंका गर्नुभएछ । म त एकदमै सोझो मान्छे । मैले बोलेका कुराहरू सोझो ढंगले नै बुझ्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्थ्यो, तर त्यस्तो भएन । प्रधानमन्त्रीले नै मलाई हस्ताक्षर गर भनेर त भनेजस्तो लाग्दैन, तर उहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ भनेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले पनि अस्पतालमै आएर ‘हस्ताक्षर गरिदिनुस्’ भन्नुभएको हो ।
तर, तपाईंले भनेजस्तै मेरो स्वभावका कारण कतिपय कुरा मलाई पच्दैन, त्यो कुरा पनि एकदमै पचेन । किनभने, एक त म बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकी छु । त्यसमाथि ओलीजीहरूले ‘बिरामी नै छैन, नाटक गरेको हो’ भनेर हल्ला चलाइरहनुभएको थियो । अर्को ‘यो सुशीलाको विरोधी हो’ भनेर पनि प्रचार गरिरहनुभएको थियो । मलाई हेप्न खोजे ।
मैले त्यस्तै महसुस गरेँ । आफ्नो कुरा भनिरहेकी छु । मलाई ठूलो रोग लागेको छैन । डाक्टरहरूले ‘दुई दिनमा डिस्चार्ज गर्छौं’ भनेका छन् । फेरि पनि अनेकथरि शंका गर्ने र कुप्रचार गर्ने काम भइरहेको थियो । त्यसैले मैले अस्पतालबाटै हस्ताक्षर गर्ने काम नमानेकी हुँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसँग यस्ता घटना धेरै छन् । उहाँले कतिपय कुरामा मलाई बुझ्नै सक्नुभएन । त्यतिखेर म उहाँको कार्यकर्ता नभएका कारण त्यो ग्याप थियो । म जसरी उहाँले भनेका कुराहरू लिन्थेँ, जति इमानदार थिएँ, त्यो इमानदारीचाहिँ उहाँले नबुझेकै ठान्छु ।
यो आरोपको म एकदमै कडा प्रतिवाद गर्न चाहन्छु । यस्तो आरोप लाग्नुको पछाडि एउटा मात्रै कारण छ, हाम्रो समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र मनस्थिति । यसलाई मान्छेहरूले हतियारका रूपमा जानी–जानी पनि प्रयोग गर्छन् । कसै–कसैले नबुझेर ‘यस्ती महिलाले सभामुख कसरी चलाउली, यसको श्रीमान्ले पर्दापछाडिबाट चलायो होला’ भन्नु स्वाभाविक हो । तर, मान्छेहरूले नियोजित रूपमै पनि यस्ता आरोप लगाउने गरेका छन् । युद्धका वेला पनि ममाथि यस्तै आरोप लाग्ने गर्थे ।
त्यतिखेरै त्यसको खण्डन गर्ने र जवाफ दिने काम मैले गरेकी थिएँ । एकपटक मलाई पार्टीले पूर्वी कमान्डमा पठाउन लागेको थियो । त्यहाँ अनन्त कमरेड हुनुहुन्थ्यो । तर, मैले पश्चिम कमान्डमै बसेर काम गरेर आफ्नो क्षमता देखाउँछु भनेर दुई वर्ष पूर्वी कमान्डमा गइनँ । ती दुई वर्ष मैले दाङको इन्चार्ज भएर काम गरेँ । पार्टीले दिएका सबै जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पूरा गरेँ । दिवाकर कमरेड अहिले हुनुहुन्न, विप्लव अहिले हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्न । उहाँहरू त्यतिवेला मेरा इन्चार्ज हुनुहुन्थ्यो ।
पहिला पम्फा भुसालको पार्टीभित्र कसैले प्रतिवाद गथ्र्यो भने त्यो मैले नै गर्थें, महिलामा । त्यसैले पुरानो कुरालाई नै सोचेर यस्तो आरोप लगाइएको होला । जयपुरीजीसँग त मेरो कहिल्यै नराम्रो थिएन । उहाँ अर्को पार्टीमा हुँदासमेत राम्रो सम्बन्ध थियो । अहिले पनि अत्यन्त राम्रो छ । अहिले त पम्फा भुसालसँग पनि एकदमै राम्रो छ । पहिला बरु पद–प्रतिष्ठामा उहाँभन्दा अगाडि नजाँदासम्मचाहिँ एक प्रकारले नराम्रो थियो भनूँ न । बाहिरबाट हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्थ्यो । त्यसलाई पनि म स्वाभाविक मान्छु ।
किनभने, दुई महिला प्रतिस्पर्धी ढंगले अगाडि बढ्नु पनि राम्रो कुरा हो नि ! मेरो स्वभाव के छ भने चित्त नबुझेका कुराहरूमा प्रतिवाद गरिहाल्छु, सहेर बस्दिनँ । मलाई सीधा–सीधा भन्नुपर्छ, छलकपट गरेको मलाई मन पर्दैन । सायद, त्यस्तै छलकपटहरू देख्दा पम्फा भुसाललाई प्रतिवाद गर्नेमा म मात्रै हुन्थेँ, महिलामा । त्यसैले पनि यी आरोप लागेका होलान् ।
त्यो बिल्कुल निराधार आरोप मात्रै हो । त्यस्तो लाग्ने एकाध अनलाइनलाई मात्र हो । हामी विवाह गर्दा नै नेता थियौँ । बिहे पनि हामीले पार्टीकै व्यवस्थापनमा गरेका हौँ । पार्टीको काममा लगातार हामी फिल्डमा खटियौँ । मैले दुईवटा बच्चा जन्माएँ, त्यतिखेर पनि म फिल्डमै छु । छोरी भइसकेपछि म बटालियन कमिसार भएकी हुँ । मेरो घरको स्कुलिङ र वरिपरिको वातावरणले पनि होला, पहिलेदेखि नै आफ्नो काम आफैं सोचेर आफैं गर्ने प्रकृतिको व्यक्ति हुँ । विवाह गर्दा नै हाम्रो सर्त नेता बन्नुपर्छ भन्ने थियो ।
किनभने, त्यसवेला राम्रा नेत्रीहरू, जसले आन्दोलनमा योगदान गर्नुभएको थियो, उहाँहरू बिहेपश्चात् घरेलु काममा मात्रै सीमित हुनुभएको थियो । रोल्पामा जयपुरी घर्ती, तारा घर्तीलगायत लगभग सबै नेत्री संयुक्त रूपमा बसेर त्यो बिरासतलाई तोड्नुपर्छ, नत्र महिला नेत्री आउँदैनन् भनेर माइन्युट नै गरेका थियौँ । नेत्रीहरू बिहेपछि घरेलु मैदान बन्ने परम्पराको यो बिरासतलाई हामी तोड्छौँ भनेर कसम नै खाएका थियौँ । ती सबै साथी अहिले पनि फिल्डमै छौँ ।
हामी दुवैजना वेलावेलामा लाभको पदमा पुगेका हुनाले धेरैलाई तपाईंले भनेजस्तै हो कि भन्ने पनि लाग्दो हो । तर, मैले कहिल्यै पनि लाभको पदमा बार्गेनिङ गरेकी छैन । अन्तरिम विधायक हुने वेला अन्तिमसम्म मेरो नाम थियो, अहिले पनि कमरेड बादललाई सोध्नुभए हुन्छ, अन्य साथीहरूलाई ल्याउनुपर्ने भएपछि म आफैं गएर मेरो नाम काटेकी हुँ । अहिलेसम्म मैले पाएका पद विभिन्न कारणवश आइरहेका छन्, कहिल्यै पनि मलाई चाहिन्छ भनेर भनेकै छैन ।
बरु युद्धमा मर्न जाने कुरामा भने मैले रोजेकी थिएँ । जनमुक्ति सेना रोजेकी थिएँ, पार्टीले मलाई त्यहाँ पठाएको पनि थियो । थुप्रै लडाइँमा ‘म जान पाऊँ’ भनेर भनेकी थिएँ, गएँ पनि । त्यहाँ मर्न पनि सकिन्थ्यो, तर बाँचेर यहाँसम्म आइयो । मलाई के लाग्छ भने यो पद, प्रतिष्ठा कसैले चाहेर मात्र हुन्न, परिस्थितिले के सिर्जना गर्छ र त्यतिवेला यो जिम्मेवारी कसले पूरा गर्न सक्छ भनेर सबैको मनमा लाग्छ, त्यतिवेला जिम्मेवारी पाउने हो । मैले पनि त्यसरी नै पाउँदै आएकी हुँ ।
वर्षमान पुनले युद्धदेखि अहिलेसम्म हेर्दा थुप्रै मोर्चाहरू सम्हाल्नुभयो र सबैभन्दा बढी रिस्की काम गर्नुभयो । जब हामी मोर्चा सम्हाल्थ्यौँ, अलग–अलग हुन्थ्यौँ । कहिलेकाहीँ सँगै पनि हुन्थ्यौँ । रोल्पालाई आधार बनाउँदा पनि धेरै रिस्क लिनुपथ्र्यो । त्यसवेला अहिले आउनुभएका कति नेताहरू इन्डियामै हुनुहुन्थ्यो । हामीले लडेर, भिडेर त्यसलाई आधार इलाका बनायौँ । त्यसपछि ‘पूर्वमा खाली भयौँ, हामी कमजोर भयौँ’ भनेपछि पूरै पार्टी र सेनाको जिम्मा लिएर पूर्वी भूमिमा हामीले योगदान गर्‍यौँ । त्यहाँ हामीले क्याडरहरू उत्पादन गर्‍यौँ । त्यसपछि भ्याली हाम्रो पूरै निल भयो, सबैजना पक्राउ पर्नुभयो, कोही मारिनुभयो, कोही बेपत्ता पारिनुभयो ।
हामीले त्यसपछि यहीँ आएर कमान्ड सम्हालेका थियौँ । म अहिले सम्झिन्छु– ०६२/६३ को आन्दोलनमा मास पठाउने नेतृत्व मैले नै गरेकी थिएँ । किनभने, काभ्रे र रामेछापको इन्चार्ज म थिएँ । जनआन्दोलनमा सबैभन्दा बढी काभ्रेबाट उपस्थिति छ । पनौतीको डाँडामा बसेर मैले त्यसको नेतृत्व गर्थेँ । जनआन्दोलनमा मास बढाउनका लागि मैले प्रत्येक दिन मिहिनेत गरेकी थिएँ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो प्रतिस्पर्धीहरूले लगाउने आरोप मात्रै हो । जनताले पनि त्यस्तो महसुस गर्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिले पनि म कुनै पद पाउनुपर्छ भन्ने पक्षमै छैन । अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि मैले ‘म सभामुख भइसकेँ, अब अरू साथीलाई पठाउनुस्, म बरु समाजसेवा गर्छु’ भनेकी छु ।
यो झुटो आरोप हो । मेरो खरो स्वभावका कारण साथीहरूले त्यस्तो बुझ्नुहुन्छ होला । मलाई बीचका कुरा मन पर्दैन, हो भने हो, होइन भने होइन । कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुँदा त्यसैलाई ‘हस्तक्षेप गरेकी छे’ भनेका होलान् । हामी दुईको आपसी समझदारी नै के छ भने उहाँको जिम्मा र उहाँको कामबारे मैले हस्तक्षेप नगर्ने, मेरो उहाँले हस्तक्षेप नगर्ने । कतिपय कुरा सल्लाहले पनि चलाउनुपर्छ । व्यावहारिक कुरा पनि हुन्छन् । त्यसबाहेक पार्टीको जिम्मा, राष्ट्रको जिम्मा भनौँ न, ती कुरामा हाम्रो कहिल्यै पनि हस्तक्षेप हुँदैन ।
उहाँले अहिले मन्त्रालय चलाइरहनुभएको छ, साथीहरूले कहिलेकाहीँ कारणवश त्यहाँ जानैपर्ने वातावरण बनाएबाहेक म गएकी छैन । म सभामुख हुँदाखेरि साथीहरूले बोलाएर मेरोमा आउनुभयो होला, नत्र उहाँ पनि आउनुहुन्नथ्यो । कुनै पनि काम नसकेको दिन, अप्ठ्यारै परेको दिन हेल्प गर्ने एउटा कुरा, तर साधारण कुराहरू जुन अगाडि बढिरहेका छन्, त्यसमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन भन्छु म । अन्य जातिका समुदायमा महिलाले जति दबिनुपर्छ, त्यो हाम्रोमा छैन । त्यही भएर पनि यसले अलिकति दमनै गर्छ कि, हस्तक्षेप गरेरै चलाउँछ कि भन्ने लाग्छ होला मान्छेहरूलाई ।
अहिले त म सबैकी भएकी छु होला । तर, मेरो पृष्ठभूमि हेर्दा त्यो कुरा सत्य हो । किनभने, म महिला भएकै कारणले आन्दोलनमा आएकी हुँ । म महिला हुँदैनथेँ भने आन्दोलनमा आउँथेँ कि आउँदिनथेँ, त्यो भन्न सक्दिनँ । समाजमा भएको अन्याय, अत्याचार, विभेद, सारा जे थिए, छोरी भएकै कारणले, समुदाय भएकै कारणले मैले भोगेकी हुँ नि त ! त्यसमा विद्रोह गर्नका लागि आएको मान्छेले आफ्नो कुरा त भन्छ नै । दोस्रो कुरा कम्युनिस्ट पार्टी भनेको अन्यायको विरुद्धमा लड्ने हो ।
उपेक्षित, अपहेलित मान्छेको मुक्तिका लागि बोल्ने हो नि ! सबैभन्दा बढी उत्पीडित को छ र अपहेलित को छ भन्दाखेरि त दलित होला । त्यसपछि कमैया, कमलरीहरू होलान्, मजदुरहरू होलान्, जसले आफ्नो श्रम बेचेर खानुपर्छ । स्वाभाविक रूपमा त्यसभित्र पनि महिला नै होलान् र जनजाति नै होलान् । परिस्थिति र परिवेशले त्यो अन्याय भएको छ । मैले पहिलेदेखि भन्दै आएकी छु, मेरो स्वभाव कुनै पनि कुरा वार–पार नै गरेर छाड्नेखालको छ । त्यसैले पनि मलाई यो आरोप लागेको होला । तर, सधैँभरि जहाँ जाँदा पनि मैले वर्गपक्षधरताको कुरा हेर्छु ।
खगेन्द्र पन्त नयाँपत्रिकाबाट